ग्रीनकार्ड होल्डरको अनुभव: अमेरिकामा पैसाको बोट रहेनछ, डिभी नपरे गर्व गर्नुहोस् - Nepali in Australia
October 8, 2021 autherLeaveaComment on ग्रीनकार्ड होल्डरको अनुभव: अमेरिकामा पैसाको बोट रहेनछ, डिभी नपरे गर्व गर्नुहोस्
तपाई बस्ने घर अपार्टमेन्ट, सवारी साधनदेखि सम्पूर्ण खर्च गर्दा बचत हुन धौधौ हुन्छ ।यदि काम बाहेकको पक्ष तपाईंले हेर्नुभएको हो भने अमेरिका भएको सबैभन्दा ठूलो पक्ष कमाई नै हो । अर्थात् तपाईंले गर्ने काम सबैभन्दा ठूलो पक्ष हो । यदि कमाउन सक्नुभयो भने विश्वको शक्तिशाली देशको सुविधा पाउनुभयो नत्र नेपालको भन्दा हालत खराब हुनसक्छ ।
हामीले नेपालका उपसचिवदेखि सचिवसम्म, डाक्टरदेखि पाईलटसम्म, सामान्यदेखि गन्यमान्यसम्म ग्रिनकार्ड पाएर अमेरिका भासिएको समाचार धेरै नै सुनेका छौं । तर ती गन्यमान्यले अमेरिकामा गएर के कमाए ? के गुमाए? भन्नेतिरको लेखाजोखा कमै गर्छौं होला । अर्थात् सबैमा अमेरिकाको ग्रिनकार्डको भूत चढेको देखेका छौं ।